लकडाउनबारे निश्चित खबर बाहिरियो।भोलीदेखी देशभर लकडाउन हुने निश्चित,पुरा पढ्नुहोस – Naya Kura Daily
लकडाउनबारे निश्चित खबर बाहिरियो।भोलीदेखी देशभर लकडाउन हुने निश्चित,पुरा पढ्नुहोस
October 12, 2020 1546
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहातको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले देशभरि २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित नाघे लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको निस्कर्ष निकाल्यो ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर ‘सीसीएमसी’लाई उक्त सिफारिश गरेको थियो । दुई सातापछि असोज २१ गते सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या २५ हजार नाघेको छ।
सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या २५ हजार नाघेको छ, मन्त्रालयको सिफारिश बमोजिम लकडाउन हुन्छ त ? प्रश्नको जवाबमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “देशभरि लकडाउन गर्ने अवस्था छैन्, हटस्पट भएको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास गरिनेछ ।”
प्रवक्ता ज्ञवाली कोभिड–१९ क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर(सीसीएमसी)का सदस्य समेत हुनुहुन्छ ।
कोलेस्ट्रोल आफैंमा नराम्रो होइन । यो हाम्रा शरीरका लागि अत्यावश्यक छ । तर आवश्यकता भन्दा बढि कोलेस्ट्रोल हुनु हानिकारक छ ।
कोलेस्ट्रोल भनेको हाम्रो रगतमा हुने बोसोयुक्त मोलिक्युल हो । शरीरका लागि आवश्यक कोलेस्ट्रोल कलेजोले बनाउँछ । त्यसबाहेक खाएका खानेकुराहरुबाट पनि कोलेस्ट्रोल प्राप्त हुन्छ ।
शरीरका हरेक कोषहरुमा हुने कोलेस्ट्रोल रगतमा बढ्दै जाँदा रक्तनलीका भित्ताहरुमा टाँसिन्छ र रक्तनलीहरु कडा तथा साँघुरो हुदै जान्छ । त्यो जम्दै जाँदा रगत जाने बाटो साँघुरो हुने मात्रै हैन, थुनिने पनि हुन्छ जसले गर्दा हृदयघात तथा मस्तिष्कघात हुने खतरा बढेर जान्छ ।
यसरी शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नुको मुख्य कारण अस्वस्थकर र असन्तुलित खानाको सेवन हो । त्यसैले कोलेस्ट्रोल घटाउने तर्फ लाग्नु पर्दछ । यसका लागी यि ११ खानेकुरा सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
सिमी गेडागुडीलाई प्रोटिनको राम्रो स्रोत मानिन्छ । विशेष गरेर राजमा, दालहरु कोलेस्ट्रोल घटाउनका लागि उपयोगी हुने गर्छन् ।
ओखर तथा बदाममा ओमेगा ३ लगायत शरीरका लागि उपयोगी तत्व हुन्छ । ओखर तथा बदामहरुको सेवनले खराब कोलेस्ट्रोल घटाउन उपयोगी हुन्छ ।
एवोकाडोको नियमित सेवनले शरीरको खराब कोलेस्ट्रोल प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण हुने गर्छ । एवोकाडोबाट पाइने पोटासियमले मुटु स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
४. बोसोयुक्त माछा
बोसोयुक्त माछा खादाँ पनि कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ । यस्ता माछामा ओमेगा ३ पाइने भएकाले शरीरका खराब कोलेस्ट्रोल घटाई राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ ।
बैगुन अर्थात भन्टा खादाँ केहीलाई एलर्जी भएपनि कोलेस्ट्रोलका समस्या हुनेहरुका लागि यो अत्यन्तै लाभदायी वस्तु हो । बैगुनले शरीरमा कोलेस्ट्रोल घटाउन सहयोग गर्छ ।
कोलेस्ट्रोलको समस्या हुनेहरुले खानैपर्ने अर्को अन्न हो, भटमास । भटमासले खराब कोलेस्ट्रोललाई घटाउने काम गर्छ । भटमास प्रोटिनको सर्वोत्तम स्रोत मानिन्छ ।
कोलेस्ट्रोलको समस्या हुनेहरुका लागि स्याउको सेवन फाइदा हुन्छ । विशेष गरी स्याउमा पाइने पेक्टिन फाइबरले शरीरमा भएको खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन सहयोग गर्छ ।
फाइबरले भरिपूर्ण ओटमिल बिहानको खाजामा सर्वोत्तम मानिन्छ । खासगरी ओटमिलमा पाइने घुलनशील फाइबरहरु शरीरमा कोलेस्ट्रोल घटाउन निक्कै उपयोगी हुने गर्छन् ।
९. काला चकलेट
काला चकलेटको नियमित सेवनले शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल घटाउँछ । तर चिनी वा गुलियो मिसाएर बनाइएको चकलेट भन्दा कोका रहेको चकलेटको सेवन उत्तम हुन्छ ।
१०. वनस्पति तेलहरु
शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बढ्न नदिन सूर्यमुखी वा जैतुनको तेलहरु राम्रो विकल्प हो । तर तेलले मात्र कोलेस्ट्रोल घट्ने भन्ने चाहिँ हुदैन ।
फिक्का वा हरियो चियाको सेवन कोलेस्ट्रोल घटाउन लागि फाइदाजनक मानिन्छ । यसले मुटुसम्बन्धी समस्याहरुबाट पनि बचाउँछ ।
Prevसोमबार धेरै नारीहरु व्रत बस्छन् । सोमबारको व्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ ।
Nextनपढ्ने लाइ ठुलो दशा लाग्नेअबस्य पढेर नाग देवताको दर्शन गरौ !